Iintlanzi ezingafihliyo | Ngeentlanzi
Ngaba unokucinga nge intlanzi esekuhleni ngokupheleleyo, ukuba ulusu lwabo lucace gca ukuba uyakwazi ukubona okungaphakathi kubo. Nangona kunzima ukukholelwa, kukho iintlobo zeentlanzi ezinemizimba ebonakalayo. Kwaye nangona kungaqhelekanga ukufumana, kuba zisetyenziselwa izifundo zesayensi, mandikuxelele ukuba zikhona.
Enye yezi ntlanzi ebonakalayo yile Irhasi, eyafunyanwa ngo-1939, kodwa kwakungekho ngo-2004 apho izazinzulu zakwaziyo ukuqokelela ulwazi olwaneleyo kolu hlobo lwesilwanyana. Kwakuloo nyaka, izazinzulu ezivela kwi-MBARI, iZiko loPhando nge-Aquarium laseMonterey Bay, zakwazi ukurekhoda lo mzekelo. IBarreleye ibonakaliswa ngokuba nenxalenye ebonakalayo yentloko yayo, ngelixa umzimba wayo ufana nolunye uhlobo lwentlanzi eqhelekileyo.
Enye yeentlanzi ezibonakalayo esezikhona zaziwa ngegama lika ikristale yekati, ehlala emanzini afudumeleyo ashushu. Nangona abantu abaninzi bengazi, olu hlobo lweentlanzi lube lolunye lweyona ntlanzi idumileyo nenqabileyo kwilizwe le-aquarium. Ukuba uceba ukukhangela iintlanzi zolu hlobo, ndincoma ukuba ubakhulise kwiqela, kuba bonke badada kunye bahle kakhulu.
Ukuba unomdla kolu hlobo lwentlanzi ebonakalayo, kubalulekile ukuba uyazi ne-Indian Glassy Fish, ehlala emanzini amatsha kwaye unokuhlala kwi-aquarium. Kubalulekile ukuba ulumke kakhulu xa ufumana ezi ntlobo kuba zithande ukujova imibala ukuze zibethe ngakumbi, kodwa le kuphela kwento ebangela ukuba babe sisifo kunye nezifo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Intlanzi esekuhleni